मुम्बइबाट उडेको एयर इण्डियाको जहाज दुर्घटना, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
मुम्बइबाट उडेको एयर इण्डियाको जहाज दुर्घटना, के छ अवस्था ?
काठमाडौं। मुम्बइबाट उड्ने क्रममा एयर इण्डियाको मातहतमा रहेको एलायन्स एयरको एटिआर जहाजको इन्जिनको एक भाग भाँचिएर भुइामा खसेको छ । मुम्बइबाट गुजरातको भुजको लागि उडेको जहाज इन्जिनको एक भाग बिना नै भुजमा सुरक्षित अवतरण गरेको बताइएको छ।
विमान बुधबार बिहान स्थानीय समयअनुसार साढे ५ बजे मुम्बइबाट टेक अफ गरेको थियो। टाइम्स अफ इण्डियाका अनुसार विमानको एउटा इन्जिनको बाहिरी कभर धावनमार्गमा भेटिएको थियो ।
यो कभरले इन्जिनलाई बाहिरी वस्तुबाट सुरक्षा दिने र हावामा हुने घर्षणलाई कम गरेर इन्जिनलाई चिस्याउने काम गर्छ। रातो रंगको यो कभर एलायन्स एयरको मुम्बइ भुज उडान भर्ने उडान संख्या ९आइ–६२५ को भएको स्रोतले बताएको छ।
उडान कुनै थप क्षतिबिना सुरक्षित अवतरण गरेको छ’ नागरिक उड्डयनका महानिर्देशक अरुण कुमारले भने। हवाइ सुरक्षा विज्ञ क्याप्टेन अमित सिंहका अनुसार कभरलाई राम्रोसँग बन्द गरिएन भने यस्ता घटनाहरु हुन सक्छन्।
विमानको मर्मतको लागि यो कभर निकाल्नुपर्छ। यो राम्रोसँग बन्द नभएको पाइलटले विमानको जाँच गर्दा पनि फेला पारेका थिएनन्। तेस्तै, भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा एक्लै जीवित बाँचेका एयरफोर्स अधिकारी ग्रुप क्याप्टेन वरुण सिंह यतिबेला अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छन्।
उनी जीवन र मृत्युको संघर्ष गरिरहँदा सामाजिक संजालमा उनले आफ्नो सकुललाई लेखेको पत्र तीब्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ। वीरता पुरस्कार शौर्य चक्रबाट सम्मानित ग्रुप क्याप्टेन वरुण सिंहले आफ्नो सकुलमा औसत दर्जाका बालबालिका र प्रिन्सिपलको लागि एक प्रेरक पत्र लेखेका थिए।
जुन आर्मी पब्लिक स्कुल चंडी मन्दिरबाट ग्रुप क्याप्टेन वरुण सिंहले सुरुवाती शिक्षा पाएका थिए, त्यो स्कुलका प्रिन्सिपललाई १८ सेप्टेम्बर २०२१ मा लेखेको पत्रमा उनले उक छात्रको रुपमा आफ्नो जीवनलाई दर्शाउँदै लेखेका थिए,
औसत दर्जाको हुनु ठिक छ। हर कोही स्कुलमा उत्कृष्ट हुँदैन र हरेकले ९० प्रतिशत स्कोर गर्न सक्दैन। यदि तपाइँ यस्तो गर्नुहुन्छ भने त यो अद्भूत उपलब्धी हो र यसको प्रशंशा गरिनुपर्छ।
उनले अगाडि लेखेका थिए ‘यदि यस्तो भएन भने पनि यो नसोच्नु कि तपाइँ औसत दर्जाको हुनुहुन्छ। तपाइँ सकुलमा औसत दर्जाको हुन सक्नुहुन्छ तर यो जीवनमा आउने कुराहरुको कुनै मापदण्ड होइन।
आफ्नो रुची खोज्नुहोस् यो कला, संगीत, ग्राफिक डिजाइन, साहित्य इत्यादी हुन सक्छ। तपाइँ जे पनि काम गर्नुहुन्छ समर्पित रहनुस्, आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गर्नुहोस्। यो सोचेर कहिल्यै सुत्न नजानुहोस् कि म अझै प्रयास गर्न सक्थें।
उनले लेखेका छन् ‘एक युवा क्याडेटको रुपमा ममा आत्मविश्वासको कमी थियो। एक लडाकु स्क्वाड्रनमा एक युवा फ्लाइट लेफ्टिनेन्टको रुपमा कमिशनपछि मलाई महसुस भयो कि म मेरो दिमाग र मन लगाएँ भने मैले राम्रो गर्न सक्छु।
मैले त्यो सर्वश्रेष्ठ बन्नको लागि काम गर्न सुरु गरें जो म केवल यो सुनिश्चित गर्नुको विरोधमा गर्न सक्थें कि म पास हुनको लागि जरुरी मानक हासिल गर्न सक्छु। पत्रमा उनले अगाडि लेखेका छन्।
राष्ट्रिय रक्षा एकेडेमीमा एक क्याडेटको रुपमा मैले पडाइ वा खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन। जब म एएफए पुगें त्यसपछि मलाई महसुस भयो कि विमानको लागि मेरो पागलपनले मलाई आफ्नो साथीहरुमाथि बढत दियो।
तैपनि मलाई आफ्नो वास्तविक क्षमतामा विश्वास थिएन। उनले आफ्नो पत्रमा आफूले पाएको शौर्य चक्रको श्रेय स्कुललाई दिँदै लेखेका छन्, म यो प्रतिष्ठित पुरस्कारको श्रेय स्कुल,
एनडिए र वायु सेनामा वर्षौंदेखि जोडिएका व्यक्तिहरुलाई दिन चाहन्छु। म दृढतासँग मान्छु कि त्यस दिन मेरो कार्य मेरा शिक्षक प्रशिक्षकहरु र साथीहरुले सम्हालेको र ल्लिाह दिएको परिणाम थियो।
तेस्तै, भारतमा आजदेखि मनाइँदै गरिएको दुई दिवसीय ‘स्वर्णीम विजय पर्व’को अवसरमा दिवंगत चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतको रेकर्डेड सन्देश जारी गरिएको छ। यो सन्देशलाई हेलिकप्टर दुर्घटना भन्दा ठिक पहिले ७ डिसेम्बरमा रेकर्ड गरिएको थियो।
एक मिनेट १० सेकेण्डको यो भिडियो सन्देशमा सीडीएस जनरल रावतले सेनाको साहसको प्रशंशा र विजय पर्वको शुभकामना दिएका छन्। यो सन्देशलाई आज पाकिस्तानसँग १९७१ को युद्धको ५० वर्ष पूरा भएको अवरमा मनाइएको विजय पर्व कार्यक्रममा देखाइयो।
सन्देशमा जनरल रावतले भनेका छन् ‘स्वर्णीम विजयपर्वको अवसरमा म भारतीय सेनाका सबै जवानहरुलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु। भारतीय सेनाको १९७१ को लडाइँमा जितको ५० औं वार्षिकोत्सवलाई हामीले विजय पर्वको रुपमा मनाइरहेका छौं।
म यो पावन पर्वमा सशस्त्र सेनाहरुका भीर जवानहरुलाई स्मरण गर्दै उनीहरुको बलिदानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। १२ देखि १४ डिसेम्बरसम्म दिल्लीको इण्डिया गेटमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रममहरुको आयोजना गरिएको छ। यो ठूलो सौभाग्यको कुरा हो।
कि विजय पर्व अमर जवान ज्योतिको ज्वालाको छायाँमा आयोजना गरिएको छ जो हाम्रा वीर शहीदहरुको स्मृतिमा स्थापित गरिएको थियो। हामी सबै देशवासीहरुलाई यो विजय पर्वमा सहभागी हुनको लागि आमन्त्रित गर्छौं। आफ्ना सेनामा छ हामीलाई गर्व,
आउ मिलेर मनाउँ विजय पर्व। जय हिंद। ८ डिसेम्बरमा तमिलनाडुको कुन्नुरमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा जनरल बिपिन रावत समेत १३ जनाको मृत्यु भएको थियो। यो दुर्घटनामा उनकी पत्नी मधुलिका रावतको पनि मृत्यु भएको थियो।